एकैचोटी हाइड्रोको २८०० कित्ता सेयर लिने भए आजको दिनमै सबै काम सक्नुस् ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > एकैचोटी हाइड्रोको २८०० कित्ता सेयर लिने भए आजको दिनमै सबै काम सक्नुस् !
एकैचोटी हाइड्रोको २८०० कित्ता सेयर लिने भए आजको दिनमै सबै काम सक्नुस् !
काठमाडौ । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीलाई निष्कासन गरेको ५ लाख ६० हजार कित्ता आइपीओ आज (बिहीबार) देखि बिक्री बन्द हुँदैछ । यसआधारमा आइपीओका लागि आज कार्यालय समयसम्म मात्र आवेदन दिन पाइनेछ ।
रैराङले जेठ २५ देखि कुल निष्कासित कित्तामध्ये प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पाँचथरको थर्पु र ताप्लेजुङको साब्लाखु गाविसका स्थानीयलाई २ लाख २४ हजार कित्ता र बाँकी ३ लाख ३६ हजार कित्ता पाँचथर र ताप्लेजुङको अन्य गाविसका वासिन्दालाई बिक्री गरेको हो । रैराङको आइपीओमा एस क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ ।
लगानीकर्ताले उक्त आइपीओमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम २८ सय कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आइपीओका लागि पाँचथरको फिदिम स्थित सिभिल बैंक, माछापुछ्रे बैंक, एनआइसी एसिया र एनएमबि बैंकको शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसैगरी, सिभिलको मेदिबुङ बजार पाँचथर र एनएमबि बैंकको फुङ्गलिङ्ग ताप्लेजुङ शाखाबाट पनि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको जारी पुँजी ५६ करोड रुपैयाँ छ । पहिलो चरणमा जारी पुँजीको १० पतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । यसपछि कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई लागि बिक्री गर्नेछ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ असार ८
२०७४ असार ८ गते १२:२३ मा प्रकाशित
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड,हेर्नुहोस् कसरी जित्यो ४५ देशका १३० संस्थालाई ?
६ दिन भयो लुक्लामा उडान अबरुद्ध भएको,पर्यटकहरु अलपत्र !
नेपाल आज नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्दै, खेल नेपाली समय दिउँसो पौने चार बजेबाट
यस्तो छ लोकसेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले निकालेको जरुरी सूचना
मस्र्याङ्दीको बिद्युत् उत्पादन क्षमता किन घट्यो र अब कहिले बढ्छ ?
एनएमबी बैंकको एसएमई कर्जा सुविधा : धितोे मुल्यांकनमा १४३% सम्म ऋण पाइने
“बिहे मेरो हो र ?” भन्दै म लजाएँ …